Home » Celebrity » *ပြုံး* မိသားစုနဲ့ အမှတ်တရ
Posted by alinsett on Mar 22, 2015 in Celebrity, Creative Writing, My Dear Diary, Myanmar Gazette, Photography, Travel | 39 comments
အပြုံးများနှင့် အမှတ်တရ ပြုံးမြင့်မိုရ်နဲ့ ပြုံးမောင်မောင်
အဲ့ အောင်ရဲလင်း ကို မတွေ့ဘူးလေတော့ ဆက်ဆက် ကို ကြည့်ပြီး ဝေဖန်ရရင် အတော် ချော် မဲ့ (စောဒီး) အတော် ချော မဲ့ ပုံပါဘဲ။
ဆက်ဆက် နဲ့ တွဲ လိုက်တော့ ကလေး တွေ ချစ်ဖို့ ကောင်းတာ ပိုပြီး ပေါ်လွင်သွားစေတယ်။ ဟိ။ jk
သားလေး ကြည့်ရတာ ပုံမှန် သွက်သွက်လက်လက် ပုံစံ လေးပါ ပြုံး ရာ။
.အားပေးစကားအတွက် ကျေးဇူးပါ အမလတ်ရေ။ ကျမ ရွာထဲ မ၀င်နိုင်တာ တကယ်ကို မအားဘူးဖြစ်နေပြီ။ အဲဒါကြောင့်ပါ။
အရီးရေ. . .
.ကိုမိုးမင်းသားကိုလည်း ကျေးဇူးတင်စကား သေချာတောင် မပြောရသေးဘူး။ ကိုမိုးမင်းသားက လာတာ နှစ်ခါရှိပြီ။ မုန့်တွေ အများကြီးပါလာတယ်။ သူလာတဲ့အချိန် ကျမကလည်း အိပ်ရာထခါစ ထမင်းအိုးတောင် မတည်ရသေးဘူး။ ဒါနဲ့ တစ်ခါ မှကို ထမင်းမကျွေးရသေးဘူး။ အားနာစရာကြီး ဟီး။ ကိုယ်က အရမ်းမိန်းမပီသတာဆိုတော့လေ ၊ စောစောထ အိမ်မှုကိစ္စလုပ် နေရတာနဲ့ မအားဘူး။
က​လေး​လေး​တွေက ကပြားရုပ်​​လေး​တွေ… အ​မေလိုပဲထက်​မြက်​ကြမှာပါ… ဒညင်းဝက်​ကလည်း က​လေး​တွေနဲ့အပြိုင်​​ဖွေး​နေ​ရော…
ငင့်…ကင်မလာ မီးလင်းသွားလို့ နည်းနည်းဖွေးသွားတာပါခီညာ…
ဘယ်လိုကနေဘယ်လိုရောက်သွားတာဒုံး ဒညင်းခွက်။ အားကျပါဘိ
ဟဲဟဲ ဟိုတနေ့က မိုးမင်းသားရဲ့ မုန့်တိုက်က မုန့်ပို့ကားနဲ့
မိန်းမတော်တော်နဲ့ ရဦးမယ် မဟုတ်သေးဘူး ထင့်.. ဟီးး
.မြန်လိုက်တာ ဘယ်တုန်းက ဓာတ်ပုံရိုက်ယူသွားမှန်းတောင် မသိတာ။ အလက်ဇင်းတို့ ရောက်တဲ့နေ့မှာပဲ စိတ်ကူးချို ချို ကနေ တစ်အုပ်ထွက်တယ်။ နှစ်ဘ၀နှစ်ကန္တာ ပါ။ ထုတ်ဝေတိုက်က ဘယ်တော့ထွက်မလဲ ကြိုမပြောဘူး။ လုပ်ချထည့်လိုက်တာပဲ။ အလက်ဇင်းတို့ ပြန်သွားပြီးမှ ဖုန်းလာတယ်။ စာအုပ်ထွက်တယ်တဲ့။ ရှေ့လ ဧပြီမှာ လောကသစ်စာပေကနေ မိဘမဲ့တိုင်းပြည် ထွက်ဦးမှာ။ အကုန်ကပ် ကုန်တယ်။ နှစ်အုပ်စလုံးက အထူကြီးတွေ။ ဖတ်ရမယ့်လူတွေကို တောင် အားနာ တယ် ။ တကယ်ပြောတာ။
က​လေး​တွေကြားထဲ ပြူးတူးပြဲတဲနဲ့ နီ့မ​ကောင်းတဲ့ အကျင့်​​တွေ ခ​လေး​ဒွေကူးကုန်​မှဖြင့်​ဟယ်​ ။။။။
သမီးလေးရော သားလေးပါ တကယ်ပဲ ချစ်စရာလေးတွေ။
ဒါပေမယ့်လည်း စာအုပ်ကအထူကြီးတွေဆိုလို့ လန့်ပြန်ရော။
မကြာခင် ဂျူးမမ ကို ရွာထဲ ခေါ်မှာ
ကလေးတွေက နှစ်ယောက်လုံး တစ်ရုပ်ထဲနော်…. အဖေတူလား .. အမေတူလား
အသားဖြူတာတော့ သူတို့ အမေတော်နဲ့ တူတာ
အလင်းစက်စ် FB ပေါ်ကထက်ပိုပြူးနေသဗျ။
.ပြုံးမြင့်မောင်နဲ့ ပြုံးမြင့်မို တဲ့လား..နာမည်လေးတွေလှ…ကလေးတွေကတရုတ်ပုံပေါက်တယ်..ဖွေးလို့
.ရန်ကုန်က တိုက်ခန်းတွေကတော့ အသက်ရှုကျပ်သဗျာ :))
.ဦးကြီးမိုက်က အိမ်အကြောင်း ခဏခဏ ပြောတယ်နော်။ အဲဒါ ဘာဖြစ်လို့လဲ သိလား။ ဦးကြီးမိုက်ကိုယ်တိုင် နေအိမ်ပြောင်းဖို့ စိတ်ကူးနေပြီ။ နေအိမ်ပြောင်းရင် ပျဉ်ထောင်အိမ်တော့ စိတ်မကူးပါနဲ့။ လုံးဝမကောင်းဘူး။ အပူအအေး ဒဏ် ပြင်းထန်တယ်။ ခြကြောက်ရတယ်။ နယ်မှာကတော့ ငွေနည်းနည်းပါးပါးရှိရင် ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်း နေလို့ရတယ်။ အိမ်ဈေးပေါတယ်။ ကျမတို့အိမ်လည်း အကျယ်ကြီးပဲ။ ခလေးတွေ သောင်းကျန်းလိုက်စမ်းဆိုတာ။ နယ်မှာက အဲလို သက်သာချောင်ချိလို့ နေဖြစ်နေတာပါ။ ရန်ကုန် မတက်နိုင်ဘူး။ ရန်ကုန်မှာ တိုက်ခန်းလေး တစ်ခန်းတောင် မ၀ယ်နိုင်ဘူး။
ဆက်ဆက် ညံ့တာလား… အကို ပဲ မတော်တာလား မသိ… အန်တီပြုံး ပုံပါမလာဘူး… မြင်ဖူးချင်ပါတယ်… ဖွဘုတ်လဲ မသုံးဘူး ကြားထားတော့ ဘီလို မြင်ရမည် မသိ…
.ပြုံးအန်တီကို ပုံ မရိုက်ခဲ့ရဘူးဗျ…
ပုံတွေကြည့် စာတွေဖတ်ပြီး တွေးမိတာက….မိဘမဲ့တိုင်းပြည် နဲ့တင် တန်သွားပြီလို့…..
ပြား = စက်ဘီး…စက်ဘီးးး
အော် ကလေးတွေများ ထွားတာမြန်လိုက်တာ မျက်စိတမှိတ်ပဲ ။
.ဟုတ်ပါတယ်မယ်ပုရေ။ အချိန်တွေကုန်တာ မြန်တယ်။ အားလုံး ဖျပ်ခနဲလိုပဲ။
.ကောင်းကင်ပြာရေ ကောင်းကင်ကြီးက ဘာလို့ ပြာနေတာလဲ။